Luna, sehatry ny gaming streaming an'ny Amazon, natomboka tamin'ny 21 Jona | Avy amin'ny mac aho
Ny sehatra gaming streaming Amazon dia manomboka amin'ny 21 Jona
Toni Cortes | | Games
Toa ny ankehitriny sy ny hoavin'ny fialambolintsika nomerika no mandalo ilay malaza «mivantana«. Tamin'ny mozika no nidirany voalohany. Amin'ny lafiny teknika no mora hanombohana azy. Nanomboka izy io Spotify taona lasa izay, ary ireto manaraka ireto dia nanaraka. Nahagaga ny fahombiazana. Ny ankamaroan'ny mozika re erak'izao tontolo izao ankehitriny dia mandeha.
Ary aorianany, ilay horonan-tsary. Tsy mila manazava ny fahombiazan'ny Netflix ary ireo sehatra video streaming rehetra misy ankehitriny, ary nanelingelina anay be dia be tao anatin'ireny volana mararin'ny pesta ireny. Ary ankehitriny dia mandeha koa ny lalao video. Efa misy sehatra maromaro mipoitra. Ny Amazon's Luna dia mandefa ny 21 Jona, mifanaraka amin'ny Mac, iPhones ary iPads. Na dia eo aza ny Apple.
Hanokatra fidirana amin'ny fampiroboroboana ny sehatra filalaovana streaming vaovao antsoina hoe Amazon i Amazon Luna amin'ny 21 sy 22 jona, izay hahafahan'ny olona manana kaonty Amazon Prime hanandrana ny serivisy vaovao hatolotry ny goavambe fivarotana an-tserasera amintsika.
Ireo mpanjifa Amazon dia afaka mahazo fitsapana maimaimpoana fito andro ho an'i Luna amin'ny Amazon Prime Day, 21 sy 22 Jona. Na dia voafetra ara-potoana aza ny tolotra, ny mpampiasa dia afaka misafidy ny hitazona ny fisoratan'izy ireo aorian'ny faran'ny fitsapana. Talohan'izay, ny fidirana amin'ny Luna dia amin'ny alàlan'ny fanasana amin'ny Amazon Fire TV ihany.
Manomboka izao, misokatra amin'ny saika ny fitaovana rehetra misy fidirana Internet tsara ny sehatra. Luna dia ho azo ampiasaina macOS, Windows, Fire TV, ary koa amin'ny fitaovana finday toy ny iPhone, iPad ary Android amin'ny alàlan'ny tranonkala fitetezana.
Nanaraka ny dian'ny Microsoft i Amazon
Amazon dia nanaraka ny dian'ny Microsoft mahita ny olana nanjo ilay goavambe Xbox tamin'ny nahafahany nanana rindranasa hidirana amin'ny sehatra filalaovana xCloud ao amin'ny Apple Store. Microsoft dia afaka "nanodinkodina" ny sakana napetrak'i Apple tamin'ny farany, ka nahatonga ny lampihazo hilalaovana na aiza na aiza web browser. Ary i Amazon dia lasa nankany amin'ny "slipstream."
Nambara voalohany tamin'ny volana septambra 2020, Amazon Luna dia tsy mitovy amin'ny serivisy rahona efa misy toa ny xCloud amin'ny fianteherana amin'ny "fantsona" na amboaran-dalao, toa ny Ubisoft +. Amin'izany fomba izany, i Luna dia toy ny fahitalavitra telegrama kokoa noho i Netflix. Misafidy "fantsona" tian'izy ireo hisoratra anarana ny mpampiasa.
Luna colina 5,99 Euros isam-bolana miaraka amin'ny Basic Access, mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny lohateny voafantina voafetra toy ny "Control", "Metro Exodus" ary "Grid". Afaka misoratra anarana amin'ny fantsona Ubisoft + beta ihany koa ireo mpampiasa, izay manolotra fidirana amina lohateny marobe avy amin'ilay developer ho an'ny € 14,99 isam-bolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Games » Ny sehatra gaming streaming Amazon dia manomboka amin'ny 21 Jona
Navoaka ny MacOS 3, watchOS 11.5, ary ny tvOS 7.6 developer beta 14.7